Hormuud News Sunday, February 18th, 2018 | 23:04
[Saturday, September 30th, 17] :: Saldhigga millitari ee Turkiga uu ka dhisay Soomaaliya oo maanta si rasmi ah loo furayo
Muqdisho (RH) Magaalada Muqdisho waxaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa in si rasmi loo furo saldhigga ciidamada Turkiga uu ka dhisay Soomaaliya.
Saldhiggan ayaa la sheegay in uu yahay midkii ugu weynaa ee Turkiga uu ka dhiso meel ka baxsan dalkiisa, waxa uu ku fadhiya dhul gaaraya 4km oo isku weer.
Saraakiil sare oo Turki ah ayaa maanta la filayaa in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho saacadaha horre si ay uga qeybgalaan furitaanka saldhiggan.
Magaalada waxaa shaley soo gaaray taliyaha guud ee ciidamada Turkiga Hulusi Akar.
Saldhiggan cusub ayaa ku yaalla xaafada Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho wuxuu saaran yahay xeebta badweynta Hindiya, waa saldhig casri ah oo dhammaan waxa uu lee yahay waxaa looga baahan yahay xarrun lagu tababbaro ciidan ama lagu hayo.
Waxaa laga dhisay garooweyn oo kubadda cagta iyo garoomo kale oo cayaaraha lagu cayaaro, sida uu lee yahay weriyaha BBC-da ee Muqdisho, sidoo kale wuxuu lee yahay jiif ay seexan karaan markiiba 1,500 oo askari.
Magaalada waxaa dhowrkii maalin ee la soo dhaafay soo gaarayey qalabka ciidamada ilaalin doona saldhiggan oo ay wararka qaar sheegayaan in ay gaarayaan boqolaal askari.
Si katsaba, dadka la socda arrimahan waxa ay lee yihiin saldhiggan wuxuu noqon doonaa mid u dub-dhexaad u ah ciidamada Soomaaliya gaar ahaan qorshaha ciidamada isku dhafka ee hadda ka billowday magaalooyinka Muqdisho, Garoowe, Kismaayo, Beledweyne iyo Cadaado
posted on Saturday, September 30th, 17